Ayikho i-Urticaria - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
Ikhaya>Amafomu e-Urticaria>Ayikho i-Urticaria
Ayikho i-UrticariaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-03T10:45:47+01:00
Ezinye izifo zibonakala zifana ne-urticaria ngakho-ke ngaphambili zahlelwa kanye nazo. Namuhla siyazi ukuthi ezinye izindlela zezifo zingemuva kwazo, ngakho-ke azisabalwa njenge-urticaria. Lezi zifo zibandakanya, phakathi kokunye,
I-Urticaria pigmentosa (i-mastocytosis enesikhumba)
Lesi sifo esingajwayelekile siwukuqongelela ngokweqile kwamangqamuzana omzimba ngemuva kwamabala — kaningi ansundu noma ansundu — namaphaphu amancane esikhumba angakha amasondo lapho engqubuzana. Lesi sifo sivame ukuvela okokuqala eminyakeni embalwa yokuqala yokuphila, futhi kaningi sibonisa inkambo eguqukayo ngemuva kweminyaka embalwa. Kunconywa ukukhishwa kwegama elibizwa nge-systemic form. Ukwelashwa kwezimpawu kufana nalokhu okusetshenziswe maqondana ne-urticaria.
Lokhu ukuvuvukala kwesitsha okudala isifuba ne-angioedema. Lesi sifo ngokuyisisekelo asihlangene nakancane ne-urticaria futhi siphathwa ngendlela ehlukile.
Ngenxa yokuphazamiseka kwezakhi zofuzo ku-enzyme (ukuzalwa komzimba, okomndeni), i-angioedema nayo ingavela. Ama-antihistamine noma ama-corticosteroids awasizi lapha, ngoba i-histamine ayibandakanyeki ekwakhiweni kwama-edema, futhi ukuxilongwa okunembile nokunakekelwa kokwelapha kuvame ukwenzeka kuphela ezikhungweni ezikhethekile noma odokotela abajwayele lesi sifo.